रातो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राबारे रोचक किम्बदन्ती « Lalitpur Khabar
२० असार ०७७, ललितपुर । उपत्यकाकै लामो समयसम्म बनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा किन र कहिलेदेखि मनाउन थालियो होला ? रथयात्रा चलनमा ल्याउने को होलान् तपाईलाई यस्तै जिज्ञाशाले कुत्कुती लागिरहेको छ कि ?
मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्राबारे यस्तै रोचक किम्बदन्ती छ । किंवदन्तीअनुसार भिक्षा माग्न आएका गोरखनाथलाई कान्तिपुरवासीले भिक्षा नदिएपछि त्यसैको झोकमा उनले पानी पर्ने नागलाई आफ्नो आसन बनाए । यसरी १२ वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल भएपछि यसको समाधानका उपाय खोज्दै जाँदा गोरखनाका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई कान्तिपुर ल्याएमा उनलाई मनाउन सकिने र सहकाल हुने थाहा पाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका गुरु बन्धुदत्त आचार्य र ललितपुरका कृषक ललित रथचक्रसमेत मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारुकामाक्षबाट नेपाल ल्याइएका थिए ।